ဧကရာဇ်ပင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဧကရာဇ်ပင် (Millingtonia hortensis) သည် မင်လင်တဲနီးယား (Millingtonia) မျိုးစုရှိ တစ်ခုတည်းသော မျိုးစိတ် ဖြစ်ပြီး၊ တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ဒေသပေါက်ပင် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် tree jasmine သို့မဟုတ် Indian cork tree ဟုလည်း ခေါ်ကြသည်။
၁ ဧကရာဇ်ပင်၏ အခြားဖော်ပြချက်များ
၁.၃ အသုံးပြုနိုင်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ
၁.၄ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တွေ့နိုင်သောနေရာများ
၂ ရုက္ခဗေဒ မျိုးစဉ်
ပင်စည် ဖြောင့်မတ်သော အပင်ကြီးမျိုး ဖြစ်သည်။ ရွက်ဆိုင် ထွက်သည်။ ရွက်ပေါင်း ဖြစ်ပြီး ရွက်မြွာ များမှာ ထိပ်ချွန်သည်။ ရွက်နားတွင် လွှသွား ကျဲကျဲ ရှိသည်။ ထိပ်ထွက် သို့မဟုတ် ကြားထွက် ပန်းခိုင် ဖြစ်ပြီး အလျား ရှည်သော အဖြူရောင် ပန်များ ပွင်ႛသည်။ သင်းသော ရနံ့ ရှိသည်။ အသီးသည် သီးတောင့်ရှည်ဖြစ်ပြီး ထိပ်နှစ်ဖက်စလုံး ချွန်သည်။
အပင်-- ပင်စည် ဖြောင့်မတ်သော သစ်ပင် ကြီးမျိုး ဖြစ်၍ အမြင့်ပေ ၄၀ မှ ၅၀ ထိ မြင့်၏။ အခေါက် ညိုဝါရောင် ရှိပြီး ကြမ်း၏။ အရွက်-- ရွက်ဆိုင် ထွက်၏။ ရွက်ပေါင်း ဖြစ်ပြီး ရွက်မြွှာများ ဘဲဥပုံ၊ လှံစွပ်ပုံ ရှိသည်။ ရွက်ထိပ် ချွန်သည်။ ထိပ်ရွက် တစ်ရွက် ပါသည်။ ရွက်နား လွှသွား ကျဲကျဲ ရှိသည်။ ရွက်ပြား ချော၏။
အပွင့်-- အပွင့် ကြီးဖြစ်၏။ အလျား ရှည်၍ အဖြူရောင် ရှိသည်။ အနံ့ အနည်းငယ် မွှေးသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင် ပွင့်သည်။
အသီး-- သီးတောင့် ရှည်မျိုး ဖြစ်သည်။ ထိပ်နှစ်ဖက် ရှည်သည်။ တပို့တွဲ တပေါင်းလတွင် အသီး ရင့်မှည့်သည်။
အမြစ်-- အမြစ်များ ဖြာထွက်လျက် ရှိသည်။ ရေသောက်မြစ် မှာမြေတွင်းသို့ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဆင်းသော်လည်း ဘေးမြစ်မြွှာ များမှာ မြေတွင် ကပ်ဖြန့် လျက်ရှိသည်။ ဘေးဘက်သို့ အမြစ်များ မှတဆင့် အပင်များ ထပ်ထွက်သည်။
ဧကရာဇ်ပင်သည် မည်သည့်မြေမျိုး၌မဆို ပေါက်ရောက်နိုင်သော်လည်း စိုထိုင်းသော ဒေသကိုကား ပို၍ နှစ်ခြိုက်လေသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုးပါး၍ ခြောက်သွေ့သော အပိုင်းများတွင်လည်း ထိုအပင်ကိုတွေ့မြင်ရ လေသည်။ ဧကရာဇ်ပင်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အနှံ့အပြားစိုက်ပျိုး ထားကြသည်။ ဧကရာဇ်ပင်၏အမြင့်မှာ ပေ ၇ဝ မျှရှိ၍ သွယ် လျားသောအကိုင်းအခက် အရွက်တို့ရှိသဖြင့် လှပသော သစ်ပင် မျိုးဖြစ်သည်။ အရွက်မှာ အလျားနှစ်လက်မခန့် ရှိပြီးလျှင် အရောင်မှာ အစိမ်းပုပ်ဖြစ်၍ တောက်ပြောင်လျက်ရှိသည်။
အခေါက်သည် ထူထဲပွရောင်း၍ ညိုမွဲမွဲအရောင်ရှိသည်။ အက် ကြောင်းများလည်းရှိသည်။ ပန်းပွင့်များမှာဖြူ၍ တံပိုးခရာတံပုံ ဖြစ်သည်။ အခိုင်လိုက်ပွင့်၍ မွှေးကြိုင်သည်။ ဧကရာဇ်ပင်၏ အသီးမှာ အလျား တစ်ပေရှိ၍ ပြားသည်။
ဧကရာဇ်ပင်ကို အကိုင်းဖြတ်၍ဖြစ်စေ၊ အစေ့ကိုဖြစ်စေ စိုက်ပျိုးယူနိုင်သည်။ ဧကရာဇ်ပင်သည် အကြီးမြန်ပြီးလျှင် သန်မာသည်။ သို့သော် အသားမှာဆတ်သဖြင့် လေပြင်း တိုက်ခတ်သောအခါ ကျိုးပဲ့ ပျက်စီးတတ်သည်။ ဧကရာဇ်ပင်၌ ထူးခြားချက်တစ်ရပ်ရှိသည်။ ယင်းမှာ အဘက်ဘက်သို့ဖြာထွက် လျက် ရှိသော အမြစ်များရှိခြင်းဖြစ်၍ ထိုအမြစ်များသည် အမြစ် တက်ပွားကလေးများဖြစ်သည်။ ထိုအမြစ်များသည် မြေပြင်ပေါ် သို့ ထိုးထွက်လျက် ရှိနေတတ်ကြရာ ထိုအမြစ်တက်ပွားကလေး များကို (အမြစ်သေး အမြစ်မွှား များပါ) ဖြတ်ယူပြီးလျှင် အသင့်တူးဖော်ထားသော တွင်းများတွင် မိုးဦးကျအချိန်၌ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်လည်း အပင်သစ်များပွားအောင် ပြုလုပ်ယူနိုင် သည်။
အရွက်၊ အပွင့်၊ အညွန့်၊ အမြစ်။
အလွန်အေးသော ဒေသမှ အပ မြန်မာ နိုင်ငံ အနှံ့ အပြားတွင် ပေါက်ရောက်သည်။
[ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရင်းမြစ် လိုအပ်သည်]
အာနိသင်-- မြန်မာဆေးကျမ်းများ[ကိုးကားချက်လိုသည်]အလို အရ ဧကရာဇ်သည် အေး၊ ခါး သောအရသာ ရှိ၏။ သွေးကို တက်ကြွစေ၏။ ငြိမ်းလည်း ငြိမ်းစေ၏။ လေကို ငြိမ်စေတတ်၏။ အသုံးပြုပုံ- အရွက်-- ၁။ အရွက်ကို ပြုတ်၍ သုပ်စားလျှင် လည်းကောင်း၊ ကြော်စား လျှင်လည်းကောင်း မီးယပ် ငုပ်ခြင်းနှင့် သွေးတိုး ရောဂါ ပျောက်၏။ အပွင့် အညွန့်-- ၁။ အပွင့်ကို ဟင်းချို အဖြစ် ချက်သောက်ခြင်း၊ အညွန့်ကို တို့စရာ အဖြစ် တို့စားခြင်းဖြင့် သွေးတိုး၊ နှလုံးတုန် ရောဂါ တို့ကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်၏။ အမြစ်-- ၁။ အမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည် နှင့် သွေးပြီး သကြား ဆားပါ ထည့်သောက်က နှလုံးတုန်၊ ရင်ခုန်၊ ခေါင်းမူး ပျောက်သည်။ ၂။ အမြစ် နှင့် အခေါက်ကို သွေး၍ မျက်စိတွင် ကွင်းပေးလျှင် မျက်စိနာ ပျောက်၏။ ၃။ ဝမ်းကြော၊ ရင်ကြောများ တင်းမာခြင်း အတွက် အမြစ်ကို ဆန်ဆေးရည် နှင့် သွေးလိမ်းက ပျောက်၏။ ၄။ အမြစ် အစိုကို ထန်းလျက်နှင့် ကျိုသောက်ခြင်းဖြင့် ခရုသင်း ရောဂါ ပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။ ၅။ အမြစ် သို့မဟုတ် အခေါက်ကို သွေး၍ လျှာကို ပွတ်ပေး ပါက အရက်မူး လွန်ခြင်းကို ပြေစေ၏။
သေရည်သေရက် အသောက်လွန်မိ၍ အမူးလွန်နေသူ အား ဧကရာဇ်မြစ်သွေး၍ တိုက်ပေးခြင်းဖြင့် အမူးပြေလာစေနိုင် သည်။ ဧကရာဇ်မြစ်ကိုသွေး၍ ဆန်ဆေးရည်၊ သကြား၊ ဆား တို့နှင့်ရောသောက်လျှင် နှလုံးတုန်ရင်ခုန် ပျောက်သည်။
ဧကရာဇ်မြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့်သွေး၍ သကြားထည့်သောက် လျှင် ခေါင်းမူးပျောက်စေတတ်၏။ ဆီးရွှင်စေတတ်၏။ ဧကရာဇ်မြစ်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့်သွေး၊ ကွမ်းသီးလုံး သုံးလုံးစာ ရလျှင် သကြားနှင့်ဖျော်၍သောက်သော် ခေါင်းအုံ၊ ဇက်လေး သွေးတိုးခြင်းမှပျောက်ကင်းစေသည်။ ဧကရာဇ်ရွက်ကို ရေနွေး ဖြော၍သုတ်စားလျှင် သွေးတိုးရောဂါ ပျောက်ကင်းစေတတ် သည်။ ဧကရာဇ်ပွင့်ကိုလည်း အခြောက်လှန်း၍ ပြုတ်ပြီးလျှင် သုတ်စားရသည်။
ဧကရာဇ်ပင်သည် ပေါ်လီမိုနီအေလီး မျိုးစဉ်တွင် ဗစ်ဂနိုနီအေဆီအီး မျိုးရင်း၌ ပါဝင်သည်။ 
↑ Lindley၊ John; Moore, Thomas (1866)။ The Treasury of Botany။ Longmans, Green & Co။ pp. 1260။ 1 May 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ genus Millingtonia.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဧကရာဇ်ပင်&oldid=718170" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၂၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။